Surwaal maqaar oo loogu talagalay ragga: tilmaamaha iyo qaabka | Ragga Stylish
Surwaalada hargaha ayaa la isticmaali jiray ilaa waqtiyadii hore, laakiin taa macnaheedu maahan inay waqtigeedii dhamaadeen. Dumar badan ayaa xidha iyaga, qaar badan oo kalena kuma dhiirran, maxaa yeelay waa nooc ka mid ah dharka xiisaha leh. Marka laga hadlayo ragga, surwaalada maqaarka sidoo kale waxay leeyihiin qaab wanaagsan, haddii aad taqaanid sida la isugu daro. Hadaad ka fikirayso inaad wax iibsato surwaal maqaar ragga ah, raadi talooyin si aad u hesho kuwa kaa dhigaya inaad ugu fiican tahay.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ogaato inaad uxirato surwaal maqaar ah ragga.
1 Cabsida surwaalka maqaarka ee ragga
3 Talooyin ku saabsan xirashada surwaalada maqaarka ee ragga
3.1 Xiro surwaal maqaar leh qaabka Mareykanka
3.2 Wuxuu xirtaa surwaal maqaar ah oo qaabkiisu u egyahay 50-meeyadii iyo 60-meeyadii
3.3 Isku dar jaakad maqaar leh surwaal maqaar ah
3.4 Dharka lo’da iyo surwaalka hargaha
Cabsida surwaalka maqaarka ee ragga
Saraawiil maqaar ah, waxaan ku aragnaa iyaga oo mararka qaarkood farshaxanno muusig ah iyo kuwa la xiriira warshadaha moodada. Rag badan ayaa soo jiita fikradda ah inay awoodaan inay isticmaalaan, laakiin waxay had iyo jeer ka baqaan fikradaha dadka kale. Sababta waxaa ka mid ah. Sidaa darteed, si looga fogaado xaalado aan raaxo lahayn, waxaan diyaarinnay taxane ah surwaal maqaar ah.
Aan ka hadalno cabsida. Mid ka mid ah ismaandhaafka ragga badani ka qabaan surwaalka maqaarka ayaa ah in loo tixgeliyo khaniis iyo waliba mooddo dumar ah. Laakiin waa inaan cadeeyno wax taas waxay yareyn kartaa cadaadiska ragga badan, aadna wey u ixtiraami kartaa khaniisiintaas wax badans. Inta badan surwaalada ay xidhaan waxaa loogu talagalay haweenka, haddii ay iibsadaan labo surwaal oo ragga ah, waxay badanaa sameeyaan isbedello qaarkood oo jirka ku habboon. Dadka qaar waxay xirtaan surwaal maqaarka ragga oo aan la beddelin. Haddii aan cabashooyinka kale oo dhan isku wadno, waxaa lagu soo koobayaa sida kuwa kale ay dhahayaan.
Kahor intaanan tixgelin xirashada surwaalka maqaarka ee ragga, kahor intaadan iibsan, waa inaan tixgelinno qaar ka mid ah isirkeena jireed. Surwaalada maqaarka ayaa ugu fiican ragga leh shax muuqaal ah, ha weynaadaan ama khafiif yihiin. Fikradda ma ahan in surwaalku ay ku habboon yihiin jirka oo dhan min dhexda, miskaha illaa lugaha oo buuxa. Haddii aad rabto inaad ilaaliso 100% raganimo, kuguma talineyno lebbiska moodada. Fikrad ahaan, surwaalada maqaarku waa inaysan aad u dabacsanayn miskaha iyo bowdyaha.
Midabka, waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad xirto madow maxaa yeelay waxaa lagu dari karaa midabbo kala duwan oo aan la tirin karin iyo qaababka dharka laabta. Sidoo kale, way ka fiican tahay inaad iibsato surwaal maqaar ah oo jilicsan marka loo eego surwaal maqaar leh dusha sare oo dhalaalaya. Dhanka naqshadeynta, dooro jarista ugu yar.
Talooyin ku saabsan xirashada surwaalada maqaarka ee ragga
Xiro surwaal maqaar leh qaabka Mareykanka
Haddii aan dib ugu noqonno asalka surwaalka maqaarka, kuwani waxay dib ugu noqonayaan Hindida Mareykanka. Waqtigaas, dadka maxalliga ah ayaa qalabkan u isticmaali jiray inay diirimaad yeeshaan. Xayawaanka ay ugaarsadeen ayaa maqaar saar ah waxayna aaminsan yihiin inay awoodooda ku heli karaan iyagoo isticmaalaya maqaarka xayawaan gaar ah.
Markii dambe, adeegsiga maqaarka ee qaabka denim ayaa ku faafay 1940-naadkii iyo wuxuu calaamad u noqday moodada Mareykanka. Saraawiisha hargaha ayaa markii dambe lawareegay xubno ka tirsan kooxda dhagaxa waxayna siisay xoogaa casri ah, ugu yaraan waqtigaas.
Tobaneeyo sano ka dib, surwaal maqaar ayaa soo noqday, laakiin Raf Simons, mid ka mid ah uruurintiisii ​​ugu dambeysay wuxuu go'aansaday inuu dib u soo nooleeyo surwaalkan, Calvin Klein waxaan ku aragnaa qaabab aad u xiiso badan.
Wixii Simons ay sameysay waxay nuugtay nuxurka jiiniska waxayna bedeshay dharka si ay uga dhigto jiinis maqaar fudud in la xidho, kaas oo lagu xidhi karo dhididka. Versace waxay sameysay wax la mid ah, iyada oo ku lammaaneynaya qaar ka mid ah daabacadaha caanka ah ee casriga casriga ah.
Wuxuu xirtaa surwaal maqaar ah oo qaabkiisu u egyahay 50-meeyadii iyo 60-meeyadii
Waa wax aan macquul aheyn in laga hadlo surwaalada maqaarka iyada oo aan la tixgelin dhagaxa iyo duuduubka iyo wakiiladeeda ugu muhiimsan. Magacyada ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhacay waxaa ka mid ah Elvis Presley iyo Gene Vincent, oo soo bandhigay surwaal maqaar sannadihii kontomeeyadii, sidaas awgeedna u dejinaya adduunyada moodada ah inay ku noqdaan waxyaabihii la isticmaalay.
Kadib, dhagax iyo duudduuban waxay bilaabeen inay u qaataan dharkan sidii labbiskii 1960-kii, waxayna noqotay halbeeg ilaa maanta. Waqtigaan, qaar ka mid ah noocyada waaweyn ayaa dib u soo celiyey nuxurka waqtiga, sida Saint Laurent, oo keensaday surwaal maqaar adag, oo ku darsaday funaanado waaweyn, qaabab xiiso leh iyo jaakadaha maqaarka, maxaa yeelay maqaarka iyo maqaarku waa isbeddel aan awoodin iska dhaaf.
Isku dar jaakad maqaar leh surwaal maqaar ah
Dadka qaarkiis, maqaarku aad ayuu halis u yahay, laakiin ku dhejinta jaakad maqaar ah waxay noqon kartaa heer kale. Haddii aad tixgelisay isku-dhafkan oo aad u maleyneyso inuusan shaqeyn doonin, markaa xaqiiqadu waxay tahay, haa, haddii aad leedahay walxaha ugu habboon, tani waa isku-dhaf aad u wanaagsan.
Ka soo qaad inaad haysatid jaakad madow iyo surwaal maqaar madow ah. Xaaladdan oo kale, waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho funaanado leh daabacyo xiisa leh (sida midka 60-kii), ama qaabab asaasi ah oo dheeri ah (sida funaanado cad, kabaha mootada ama Prada iyo kabaha kale ee caddaanka ah ee aan waligood bixi doonin) xarrago leh oo xarrago leh) oo xiiso leh. Isbarbardhiga maaddadu marwalba waa lagu guuleystaa, inta ay isku dheellitiran tahay. Dhinac, waxaan leenahay maqaar shaqsiyeed, waa halyeeyada, waxay ka tarjumi kartaa iftiinka waxayna soo jiidan kartaa dareen badan.
Haddii aad rabto muuqaal dheellitiran, jilicsan ayaa ah ikhtiyaarka ugu habboon maxaa yeelay waa qaab aasaasi ah oo u keenaya hawo miyir leh dharkaaga. Waxay noqon kartaa jaakad jilicsan oo bunni ah, madow ama midab buluug ah waxayna u egtahay mid fiican.
Dharka lo’da iyo surwaalka hargaha
Waa inaad aragtay isku-darka caadiga ah ee jaakadaha maqaarka iyo jooniska jeexjeexan, maxaa yeelay hadda waxbaan soo rogi doonnaa. Surwaalku wuxuu ka sameysnaan doonaa maqaar qeybihiisuna waxay noqon doonaan denim. Jaakada denim sidoo kale waa qaab caadi ah, kaas oo lagu dari karo dhar kasta.
Xaaladdan oo kale, waxaan kugula talineynaa jaakad buluug khafiif ah oo umuuqda mid dabacsan oo waxay leeyihiin qaab u eg 80-meeyadii iyo 90-naadkii. Shirkadaha qaar sida Maison Margiela waxay sii daayeen jaakado jilicsan oo gacmo furan ah iyo taxane taxane ah oo si fiican ugu eg surwaal maqaar ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto sida laysugu daro surwaalada maqaarka ee ragga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Surwaal maqaar oo loogu talagalay ragga
Sida loo ogaado haddii nin saaxiib leh uu ku jecel yahay